प्रधानमन्त्रीको राहत बितरणमा डन कुमार घैंटे उपसंयोजक – YesKathmandu.com
प्रधानमन्त्रीको राहत बितरणमा डन कुमार घैंटे उपसंयोजक
मङ्गलबार १२, जेठ २०७२
काठमाडौ । भूकम्पपीडितलाइ सहयोग गर्न बनाइएका संयन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले डनहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डन कुमार घैटेलाई शनिबार राहात कार्यक्रमका लागि काठमान्डौको उपसंयोजकको जिम्वेवारी दिई बालुवाटारबाट बिदाइ गरे ।
कांग्रेसको खेलकुद बिभागले बनाएको स्वेम सेवक टोलीमा घैटेलार्इ उपसंयोजक बनाइएको छ, जसमा प्राय गुण्डगर्दी पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन् । टोलिको संयोजकमा हाती भनेर चिनिने राजु श्रेष्ठ छन् । घैटे सहितको समूहलार्इ प्रधानमन्त्री आफैले बिदाइ गरेपछि प्रहरी समेत अचम्ममा परेका छन् ।
उक्त समूहले शनिबार काभ्रेस्थली तथा आइतबार चुनिखेलमा राहात तथा पुनर्स्थापनाको काम गरेको थियो । कांग्रेस कै मिनकृष्ण महर्जन ललितपुरमा सक्रिय भएका छन् ।
त्यस्तै मधेशी जनधिकार फोरमका केन्द्रिय सदस्य रहेका गणेश लामा पनि काभ्रेमा राहात बाढिरहेका छन् ।
चक्रे मिलन मिलन गोर्खा लगायतका जिल्लामा राहात बाडिरहेका छन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
देशलाई विपद् परेको बेला युवालाई विदेश खेद्ने ?
teeka bantawa rai says:
Actually, it is not the don that are run by the netas BUT neta’s are being run by the so-called don………….. hahaaaaaaaaa………. isn’t ridiculous!!??